OEM SERVICE - Guangdong Shengte Electric Co., Ltd.
Raira Kuyerera Chati
Isu tinopa zvigadzirwa zvine hunyanzvi hwekugadzira tekinoroji, epamberi tekinoroji nhanho, yakakwana nzira yekuyedza, yakakwira mwero uye mhando yepamusoro.
Chigadzirwa tekinoroji hunyanzvi, yemhando yepamusoro sevhisi, kusangana nezvinodiwa zvakasiyana zvevatengi, uye kugadzirisa matambudziko kune vashandisi muhunyanzvi uye mushure-kutengesa.
Kana iwe uchitsvaga yetsika shanduko, ndapota taura nesu!
Kuti upe mutambo uzere kune zviwanikwa mabhenefiti emabhizinesi emativi ese, zvinoenderana nemutemo wekubatsirana, kuhwina-kuhwina nekusimudzira kwakajairika, mativi maviri akasvika mazwi anotevera pane kugadzirwa kweOEM:
1. Kuchinjana kwemabhizimusi echikwereti zvinhu pakati pemapato maviri izvi zvinofanirwa kuve zvechokwadi uye zvinoshanda, zvikasadaro kurasikirwa kunobva ipapo kunozotakurwa nebato rinopaza.
2. Nzira dzekushandira pamwe
1. Bato A rinopa Bato B kugadzira zvigadzirwa nemimwe michina ine zita rekambani, kero uye chiratidzo chechiratidzo chePati A. Bato B rinovimbisa kuti zvigadzirwa zvakagadzirwa hazvi pesane nekodzero dzepfuma dzevatatu nekodzero dzechokwadi nezvido.
2. Bato B rinovimbisa kuti zviratidziro zvezvigadzirwa zvakapihwa zvinoenderana nezvazvino zvigadzirwa zvevatengi uye zvinodiwa zvinoenderana nematanho emunyika, uye kuti izvo zvigadzirwa zvakapihwa zvinoenderana nezvinodiwa zvekuchengetedzwa kwezvakatipoteredza.
3. Zvigadzirwa zveOEM zvinotengeswa zvachose neBato A. Bato B harisi basa rekutengesa. Bato B harifaniri kutengesa zvigadzirwa zveOEM zvakapihwa neBato A kune chero wechitatu bato.
4. Mushure mekupera kana kumiswa kwekudyidzana, Bato B harifanirwe kuburitsa kana kutengesa zvigadzirwa nePart A's brand logo mune chero fomu.
5. Bato A rine mvumo yekutumira vashandi kuti vatarise zvinhu zvakagadzirwa, zvishongedzo, maitiro ese ekugadzira, mhando yechigadzirwa, nezvimwe zveOEM zvigadzirwa. Bato B rinoshanda pamwe nekubatsira nezvose zvinoedza.
3. Nzvimbo, maitiro uye mutengo wekutakura (kuendesa)
1. Zvinosarudzwa nemapato maviri kuburikidza nekubvunzana.
2. Zvinodhura zvekugadzira zvigadzirwa nekugadzira ndiro zvichafambiswa pakati pemativi maviri.
4. Chigadzirwa Kupakata uye Kudzivirirwa Zvinodiwa
1. Bato A rinopa dhizaini dhizaini yekurongedza, mabhokisi emavara, mirairo, zvinyorwa, mazita ezita, zvitupa zvekuenderana, makadhi ewaranti, nezvimwe. sampuli.
2. Mushure mekupera kana kumiswa kwekudyidzana pakati pemapato maviri, Bato B harizove nemvumo yekushandisa kana kuburitsa chero chigadzirwa chine mucherechedzo wePati A chero nzira.
1.Iwe muridzi wechitupa chakapihwa neChechi A (kusanganisira kurongedza dhizaini, magirafu, mavara echiChinese, Chirungu uye mubatanidzwa wazvo, nezvimwewo) ndeweBato A. Bato B rinoshandisa chiziviso mukati mechikamu chakabvumidzwa neBato A uye harifanirwe chinja kana kuwedzera chiyero chekushandisa kwayo pasina mvumo.
6. Mushure mekutengesa Sevhisi
1. Iyo mushure-kutengesa uye garandi nguva ichave inotaurirana pakati pemapato maviri.
2. Bato B rinoita zvakadzama zvisungo zvakatarwa muChigadzirwa Hwemutemo Mutemo wePeople's Republic of China. Bato B richaita zvese zvavanogona kugadzirisa matambudziko ekudzoka uye kuchinjana zvinhu zvakakonzerwa nezvinetso zvePati B, uye mari inoenderana inozotakurwa neBato B; Bato A richava nebasa rezvemari inoenderana nekukanganisa zvigadzirwa zvinokonzerwa nekushandisa zvisina kujairika.